ဘယ် programming language စ လေ့လာမလဲ ( Part2) – MYSTERY ZILLION Blog
Posted on September 7, 2010 by saturngod
ဘယ် programming language စ လေ့လာမလဲ ( Part2)
အပိုင်း ၁ မှာ Programming ဆိုတာဘာ။ Programming Langauge ဆိုတာ ဘာလဲဆိုတာကို ရှင်းလင်းခဲ့ပါတယ်။ Programming Lanaguage Generation တွေကိုလည်း ရှင်းပြပြီးပါပြီ။ ဒီ အပိုင်း ၂ မှာတော့ ဘယ် langauge ကို လေ့လာသင့်သလဲဆိုတာကို ဆွေးနွေးပါမယ်။
အရင်ဆုံး ကျွန်တော် ဆွဲထားတဲ့ route map လေးကို ကြည့်လိုက်ပါ။
အဲဒါကတော့ သာမာန် သမာရိုးကျ သွားဖို့ လမ်းကြောင်းလေးပါ။
လုပ်ငန်းခွင် မဝင်သေးသူများ အနေနဲ့ အရင်ဆုံး route map လေးကို ကြည့်လိုက်ပါ။ အဲဒီမှာ ပထမဆုံး အဆင့်အနေနဲ့ C++ , Pseudo , Flowchart တွေနဲ့ စထားပါတယ်။ အခုနောက်ပိုင်း UCSY မှာ Flowchart နဲ့ Pseudo ကို သင်မသင်တော့ မသိတော့ပါ။ C++ မတိုင်ခင်မှာ Pseudo နဲ့ Flowchart ကို လေ့လာခြင်းအားဖြင့် programming flow နားလည်သွားဖို့ပါ။ Programming langauge တစ်ခုကို မသင်ခင်မှာ program flow ကို နားလည်ဖို့ analyst လုပ်တတ်ဖို့ လိုပါတယ်။ Programming က thinking က အရေးပါပါတယ်။ Program တစ်ခုကို စရေးတဲ့အခါမှာ thinking ပိုင်းကို အဓိကျပါတယ်။
တော်တော်များများဟာ C++ နဲ့ စတင်ပြီး ရေးရတာကို သဘောကျပြီးတော့ Pseudo နဲ့ Flowchart ကို လေ့လာရမှာကို သဘောမကျဘူး။ Pseudo နဲ့ Flow chart ကို သင်တဲ့အခါမှာ ပြန်စစ်ပေးဖို့ လူလိုပါတယ်။ C++ ကတော့ အခုရေး အခု run အခု အဖြေထွက်ပါပဲ။ ဒါကြောင့် လူအရမ်းများတဲ့ သင်တန်းတွေ UCSY တွေမှာ Pseudo နဲ့ Flow chart ကို စိတ်ဝင်စားမှု နည်းနိုင်ပါတယ်။
ပထမဆုံး လေ့လာသင့်တာကတော့ C ကို နည်းနည်းနဲ့ နောက်ပိုင်း C++ ကို ထပ်မံလေ့လာသင့်ပါတယ်။ C++ မှာ Object Oriented ပိုင်းကို နားလည်အောင် လေ့လာခဲ့ဖို့လိုပါတယ်။ ဒါမှသာ နောက်ပိုင်း အခြား Langauge ကို ကူးတဲ့အခါမှာ လွယ်ကူအောင်ပါ။
လက်ရှိ အလုပ်လုပ်နေပြီး programming ကို စိတ်ဝင်စားလို့ လေ့လာနေသူများအတွက်ကတော့ python က အသင့်တော်ဆုံးပဲ။ C++ ကတော့ အခြေခံကနေ စပြီး လေ့လာတာကောင်းပေမယ့် အချိန်မရှိတဲ့ သူများအတွက်ကတော့ python က လွယ်ကူမြန်ဆန်စွာ ရေးသားနိုင်တဲ့အတွက် အချိန်လည်း သိပ်မကုန်တော့ပါဘူး။ python ကိုလေ့လာပြီးသွားရင်တော့ အခြား language တွေကို လေ့လာလိုစိတ် အားနည်းသွားမှာတော့ အမှန်ပါပဲ။ python က အခြား language တွေထက် စာရင် လေ့လာရတာ လွယ်ကူပြီးတော့ ရေးသားရတာလည်း လွယ်ကူပါတယ်။
ဘယ်လိုင်းကို သွားမလို့ လေ့လာတာလဲ
programming ကို လေ့လာတော့မယ်ဆိုရင် ဘယ်လိုင်းကို သွားမလို့ လေ့လာတာလဲဆိုတော့ မေးခွန်းကိုလည်း မေးသင့်ပါတယ်။ အဲဒီ မေးခွန်းပေါ်မှာ အခြေခံပြီးတော့ ဘယ် language ကို လေ့လာသင့်သလဲဆိုတာကိုလည်း ဆုံးဖြတ်သင့်ပါတယ်။ ဘယ် programming ကိုပဲ သွားသည် ဖြစ်စေ OOP ကိုတော့ ကျေညက်အောင် လေ့လာထားဖို့လိုပါတယ်။
Windows Platform ကိုသွားမယ်ဆိုရင်တော့ C++ နဲ့ပဲ စစ python နဲ့ ပဲ စစ အဆင်ပြေပါတယ်။ C++ ကို လေ့လာတဲ့သူတွေကတော့ C# သို့မဟုတ် Java ကို ကူးပြောင်းပြီး ရေးဆွဲတာက ပိုအဆင်ပြေမယ် ထင်ပါတယ်။ python အတွက်ကတော့ နည်းနည်း ထပ်ဖြည့်ပြီး လေ့လာရုံပါပဲ။
Mac and Linux ကိုသွားမယ်ဆိုရင်တော့ python နဲ့လည်း ရေးလို့ရသလို C++ နဲ့လည်း ရေးလို့ရပါတယ်။ Mac အတွက်ကတော့ C ကို အခြေခံထားတဲ့ objective-c ကို ထပ်ပြီး လေ့လာသင့်ပါတယ်။ C++ သမားတွေအတွက် လွယ်လွယ်ကူကူ objecive-c ကို လေ့လာနိုင်ပါတယ်။
Web Development ကို သွားမယ်ဆိုရင်တော့ C++ ကနေ PHP သို့မဟုတ် ASP.NET (C#) , Ruby on Rail စတာတွေ ကို ပြောင်းလဲ လေ့လာဖို့လာပါပြီ။ Python ကတော့ Django လိုမျိုး python framework တွေကို အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ Web Development အတွက် ထွေထွေ ထူးထူး မပြောတော့ပါဘူး။ Route Map ကို လေ့လာလိုက်ရင် ရပါမယ်။ Web Development သွားဖို့အတွက် web essential ကို ကျေညက်နေဖို့လည်း အဓိကျပါတယ်။
Mobile Development မှာကတော့ C++ အခြေခံရှိထားတဲ့ သူတွေအနေနဲ့ အတော့်ကို အဆင်ပြေပါတယ်။ Java , Objective-C , Android SDK စတာတွေကို လွယ်လွယ်ကူကူ လေ့လာနိုင်ပေမယ့် python အတွက်တော့ mobile development က ထဲထဲဝင်ဝင် မရှိသေးပါဘူး။ ဒါကြောင့် python သမားတွေအနေနဲ့လည်း ကိုယ် develop လုပ်မယ့် mobile platform ပေါ်မူတည်ပြီး language ကို ထပ်မံလေ့ဖို့လိုပါတယ်။
ဘယ် language ကို စလေ့လာသင့်သလဲဆိုတဲ့ အထဲမှာ C နဲ့ python ၂ ခု ထဲက တစ်ခုပါ။ အခြေခံ ကောင်းလိုချင်ရင်တော့ C ကို စလေ့လာသင့်ပါတယ်။ C က python နဲ့ ယှဉ်ရင် အများကြီး လေ့လာရခက်ပြီးတော့ နောက်ပြီး အခြား language တွေကို ကူးပြောင်းလေ့လာတဲ့ အခါမှာ အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်။ လိုအပ်တဲ့ langauge ကို C အခြေခံရှိထားတဲ့သူတွေ အနေနဲ့ လွယ်လွယ်ကူကူ ပြောင်းလဲ လေ့လာနိုင်ပါတယ်။ Python သမားတွေအနေနဲ့ကတော့ အခြား langauge ကို ကူးပြောင်းပြီး လေ့လာဖို့ သိပ်မလိုဘူးလို့ ဆိုရမှာပေါ့။ mobile development က လွဲရင် အခြား platform တော်တော်များများမှာ python ကို အလုပ်လုပ်နိုင်ပါတယ်။ သတိထားစရာ တစ်ခုက python အတွက် web server setup က php ထက်စာရင် အနည်းငယ် ရှုပ်ထွေးပါတယ်။ ဒါတွေက နောက်ပိုင်း သူ့အလိုလို သင်သွားမှာဆိုတော့ မလိုအပ်ပါဘူး။
၁၀ တန်းပြီးခါစ လူတွေ သို့မဟုတ် လုပ်ငန်းခွင်ထဲက မဟုတ်တဲ့သူတွေအနေနဲ့ C++ ကို စတင်လေ့လာသင့်တယ်လို့ အကြံပေးပါရစေ။ ဘာလို့လည်းဆိုတော့ အခြား language တွေကို လွယ်လင့် တကူကူးပြောင်း လေလ့ာနိုင်အောင်ပါ။ လုပ်ငန်းခွင် ဝင်ရောက်နေတဲ့သူတွေအတွက်ကတော့ အချိန်မရှိတဲ့ ကြားကလေ့လာနေရတာ ဖြစ်လို့ python ကို စတင်လေ့လာသင့်ပါတယ်။
လိုအပ်တာတွေ ကျန်ခဲ့တာတွေကို comment ပေးပြီး ဆွေးနွေးနိုင်ပါတယ်ဗျာ။
CategoriesBasic, Computer TagsProgramming
11 Replies to “ဘယ် programming language စ လေ့လာမလဲ ( Part2)”
ကျွန်တော်က designer တစ်ယောက်ပါ။ programming ကိုလေ့လာချင်သလို တက်လဲ တက်ချင်ပါတယ်။
programmer တစ်ယောက်လဲ ဖြစ်ချင်ပါတယ်။ အစ်ကို အခုတင်ထားတဲ့ lesson2အထိ ကျေညက်အောင် လေ့လာထားပါတယ်။
ဆက်ပြီးတော့လဲ အခြေခံကျကျ လေး ရှင်းပြပါအုံးလို့။
တကယ်တော့ ကိုယ်ဘာနဲ့ အဆင်ပြေမလဲဆိုတာ အရင်ကြည့်ဗျ။ ကိုယ့်အတွက်က Designer နဲ့ သင့်တော်မလား။ Programming နဲ့ သင့်တော်မလားပေါ့။ အဲဒါက အရေးကြီးတယ်။ ဝါသနာနဲ့ သင့်တော်တာရယ် တထပ်တည်းကျရင် ပါရမီရှင် လို့ ခေါ်လို့ရတာပဲ။
အေးဗျာ ကျေးဇူးတင်လိုက်တာ၊ အခုလိုမျိုးလက်ရှိလုပ်ငန်းခွင်ဝင်နေတဲ့ သူတစ်ယောက်က ရှင်းပြပေးတာကို မျှော်လင့်နေတာကြာပါပြီ၊
နောက်ထပ်လဲဆက်ရေးပေးပါဦးဗျာ ဘာယူရင်ကောင်းမလဲတွေဝေနေတဲ့သူတွေအတွက် အသင့်တော်ဆုံးပို ့စ်လေးပါ။
ဆက်မျှော်နေမယ်။ ကျေးဇူးတင်တယ်ဗျာ ပညာဒါနဝေမျှနိုင်ပါစေ။
Orpha Sontag says:
.”` I am really thankful to this topic because it really gives great information ;.’
ကျွန်တော်ကလည်းဒီလို ကိစ္စဆို ထမင်းမေ့ ဟင်းမေ့ကောင်လေ…. ဒီလိုရေးထားတာလေးကို ဖတ်ရတော့မှ ပရိုဂရမ်ပိုင်းကို ဘယ်လိုစနစ်တကျ လေ့လာရမလဲဆိုတာ သဘောပေါက်တော့တယ်… ကျေးဇူးပဲဗျာ
Sitt Naing Tun says:
database administrator တယောက်ဖြစ်ချင်ပါတယ် ။ အဲ ဒါပေမဲ့ ဘယ်က ဘယ်လို လေ့လာ ရမှန်းမသိဘူးဖြစ်နေတယ်။ language အနေ နဲ့ဆိုရင်ကော ဘာတွေ လေ့လာသင့်ပါသလဲ ရှင့် ။။ လမ်းပြပေးပါ ။။
အကို C++ ကိုမြန်မာလိုရှိရင်ပေးပါအကို
ကျွန်တော်က ကွန်ပျူတာကျောင်းသားမဟုတ်ပါဘူး ကိုယ့်ဖာသာလေ့လာချင်လို့ပါ
I amacivil engineer. But I am interest in computers. such as softwares, programming & so on….. but I amabeginner user. but my hobby is learning computer. and so could you help me what should I do and I want to take some diaploma about IT. I want to attend other traning class. and could you please e-mail me ? . thank you……
Previous PostPrevious ဘယ် programming language စ လေ့လာမလဲ
Next PostNext Learn Objective-C : Day 5